ओली अल्पमतमा परेपछि कार्यदल भंग, नेकपा नै विघटन हुन सक्ने चेतावनी ! — Motivatenews.Com
ओली अल्पमतमा परेपछि कार्यदल भंग, नेकपा नै विघटन हुन सक्ने चेतावनी !
फागुन ११ काठमाडौँ – पार्टी एकताको सांगठनिक कामको टुंगो लगाउन गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अधिकार सम्पन्न ९ सदस्यीय कार्यदल भंग भएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा शक्तिशाली कार्यदल नै भंग गरिएको हो।
कार्यदलका बहुमत सदस्यले एक साताको समय थपिए आफूहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार प्रतिवेदन बुझाउने प्रस्ताव राख्दा पनि कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले अध्यक्षको निर्देशनमा काम गर्न नसक्ने अडान लिएपछि सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गरेको हो।
सरकार र पार्टीको पनि नेतृत्व लिँदा पार्टी सञ्चालनको काम प्रभावकारी हुन नसकेको ती नेताले बताए । उनका अनुसार संयोजक थापा र महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्न तयार नभएपछि कार्यदलको बैठक नै नबस्ने र भंग गर्ने अवस्था आएको हो ।
बिहीबार सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले अहिलेसम्म भएको कामको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले कार्यदल भंग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सचिवालयको बैठकले कार्यदल भंग गरेर एकताको बाँकी काम सचिवालयले नै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कार्यदलका संयोजक पछि हटेकाले कार्यदल भंग भएकोे बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यदललाई काम गर्न दिनुपर्दथ्यो, तर पुनः भंग गर्ने निर्णय भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ पार्टी एकताको प्रक्रिया कहिलेसम्म सकिन्छ त भन्ने जिज्ञाशामा वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभयो– ‘हामी अब चुप लागेर बस्दैनौं, यो गतिले पार्टी अगाडि बढ्ने हो भने विघटन हुन सक्छ ।’